स्वर्णिमा राजभण्डारी - अन्य - नारी
श्रावण १८, २०७८ कर्पोरेट क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता देखिए पनि त्यो त्यति उत्साहजनक छैन । यो क्षेत्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताका लागि परिवार, समाज र राष्ट्रले उत्प्रेरक र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा महिला निर्णायक तहमा पुग्न आवश्यक कुराहरू के–के हुनसक्छन् ?
सर्वप्रथम शिक्षा, अवसर र मेहनत आवश्यक छ । त्यसबाहेक कामप्रतिको सन्तुष्टि, चित्तबुझ्दो तलब तथा पुरुषसँग तुलना नगर्ने खालको वातावरण हुनुपर्छ ।
नेपाली परिप्रेक्ष्यमा कर्पोरेट क्षेत्रले महिला सशक्तीकरणमा कस्तो टेवा पुर्‍याएको छ ?
सशक्तीकरणलाई कुन रूपमा लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कर्पोरेट क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कुनै महिला कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ अथवा आफ्नो कार्यालयभित्र महिला सहभागितालाई जोड दिन सक्छ । संघ–संस्थाको आ–आफ्नो नीतिअनुसार सबैले आफ्नै तवरले कुनै न कुनै रूपमा महिलाका लागि काम गरिरहेका छन् ।
कोरोनाका कारण यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई कस्तो असर परेको छ ?
यो क्षेत्र मात्रै नभई अन्य क्षेत्रमा पनि चौतर्फी असर परिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रमा पनि महिलामा मानसिक एवं शारीरिक रूपमा गहिरो असर परेको छ ।
ज्यास्मिन हाइजिनले महिला स्वास्थ्यमा खेलिरहेको भूमिकाबारे बताइदिनुस् न ?
हाम्रो कम्पनीले महिला स्वास्थ्यलाई सधै प्राथमिकतामा राखेर नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको सर्वसुलभ मूल्यमा सहज ढंगले हरेक महिलाले स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न पाऊन् भन्ने हो । हामीले स्यानिटरी प्याड डिस्पोजल मेसिन पनि बजारमा ल्याएका छौं । दश हजारभन्दा बढी स्कुल–कलेजमा महिनावारीसम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गरी यही विषयसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गरिसकेका छौं । जहाँ स्यानिटरी प्याडको आवश्यकता छ त्यहाँ निःशुल्क वितरण गरेका छौं ।
तपाईंले कहिल्यै आफूले गरिरहेको काममा असुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म मैले गरिरहेको काममा त्यति धेरै असुरक्षित महसुस गरेकी छैन ।
जीवनको कुनै क्षणमा आफूले दिएको बलिदान ?
मेरो परिवार, साथी सर्कल तथा म कार्यरत संस्थाको साथ र सहयोगले जीवनमा मैले त्यस्तो कुनै ठूलो बलिदान दिएजस्तो लाग्दैन ।
तपाईंको आइडिया काम लाग्दैन भनेर कसैले भनिदियो भने कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
म रचनात्मक आलोचनामा विश्वास गर्छु । जीवनमा यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुलाई उपलब्धिको एउटा खुड्किलो पनि मान्छु । त्यसैले सबैको मतलाई कदर गर्दै आफ्ना अनुभवहरू र बुद्धिमा काम लिन्छु ।
तपाईं आफूलाई किन अरूभन्दा फरक ठान्नुहुन्छ ?
हरेक व्यक्ति आफैंमा पृथक् र सक्षम हुन्छन् । मैले जुन शिक्षा पाएँ, ज–जसको साथ पाएँ र मेरो अनुभव र सोच अनि क्षमताले मलाई अरूभन्दा स्वतः फरक बनाउँछ ।
महिला स्वास्थ्यका लागि एउटा कुनै चमत्कार गर्ने शक्ति प्राप्त भए के गर्नुहुन्छ ?
साँच्चिकै यस्तो भइदियो भने त म महिला र पुरुष दुवैलाई महिनावारी हुने बनाइदिन्थें । जसले गर्दा महिनावारीमा हुने भेदभाव रोकिन्थ्यो । सबैका लागि महिनावारीलाई सामान्य लाग्न सक्ने बनाइदिन्थें । यसले महिला स्वास्थ्यमा असर पर्ने थिएन । अर्को कुरा हरेक महिला पूर्णरूपमा स्वस्थ हुने वरदान पनि दिन्थें ।
मंसिर ३, २०७६ - पोखरमामा फेसनमय जीवनशैली
श्रावण ३२, २०७६ - ढुंगासँग महिलाको जीवन
मंसिर १७, २०७५ - महिला निर्देशित ‘अगेन्स्ट अल अड’ सर्वोत्कृष्ट
जेष्ठ ८, २०७५ - महिलामा ग्लास सिलिङको असर
माघ २८, २०७४ - प्रियंकाका लागि मेकअप टिप्स
आश्विन ४, २०७४ - दसैंमा मासु
आत्महत्या भाद्र २५, २०७८
पुर्ख्यौली पेसा फैलाउँदै भाद्र २०, २०७८
एकल बुवा भाग्यमानी सन्तान भाद्र १५, २०७८
समाजसेवामा आनन्द भाद्र १४, २०७८
कोरोना कालमा रेस्टुरेन्टको योजना भाद्र ६, २०७८
अपाङ्गता भएका पीडितको न्यायमा छैन पहुँच भाद्र ४, २०७८